မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမြှင့်တင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေး | UMFCCI
Written by UMFCCI Administrator // February 14, 2019 // UMFCCI News // No comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel သည် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများအား ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်-မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်နိုင်ရေး လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
သံအမတ်ကြီးမှ အမေရိကန် ရင်းနှီးရင်းမြှုပ်နှံမည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ မြှင့်တင်နိုင်ရေး ၊နားလည်တတ်ကျွမ်းနိုင်ရေးနှင့် အခြားသောကဏ္ဍရပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အမေရိကန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ စေလွှတ်ပေးနိုင်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများ၊ အလုပ်သမားဥပဒေများအကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ဇွန်လတွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် USA Investment Summit သို့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်နိုင်ရေး ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖက်မှလည်း အားကောင်းသောစီးပွားရေးကဏ္ဍများ နိုင်ငံသို့ လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်ထားပါကြောင်း၊ အမေရိကန်ပညာရေးကိုလည်း လာရောက်စေလိုပါကြောင်း ၊ အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုပ်ငန်းရှင်များ တိုင်းပြည်သို့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ စေလိုကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော ဦးသိန်းဟန်၊ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေး၊ ဦးသောင်းတင်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ကြည်စိုး၊ တွဲဖက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ဒေဝ နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆွေတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
သံအမတ်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် စာကြည့်တိုက်သို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။